प्रतिपक्ष, बलमिच्याइको राजनीति अन्त गर ! « Post Khabar
प्रतिपक्ष, बलमिच्याइको राजनीति अन्त गर !
प्रकाशित मिति: २३ चैत्र २०७५, शनिबार ०५:५०
संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक – २०७५ ध्वनी मतका साथ पारित भएको छ । संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफलका आधारमा संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयक बहुमतबाट पारित भएको हो । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विधेयक पारित गर्न नदिन संसद्मा हो-हल्ला गरे पनि सो प्रयास सार्थक हुन सकेन । अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्नै नदिने प्रपञ्च विफल भएको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष वा सरोकारवालाको माग हुबहु पूरा हुने अवस्थै रहँदैन । यो सम्झौता र लेनदेन गर्ने ठाउँ पनि हो । मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने सोचले समस्यालाई झन जटिल बनाउन सक्छ । बहुमतीय शासन स्वीकार गर्छु भन्ने दलका लागि बलमिच्याइको बाटो उपयुक्त होइन ।
मुलुक अन्तरिमकालमा रहेका बेला जस्तै परिवर्तित समयमा सबैलाई चित्त बुझ्ने वा बुझाउने खालका निर्णय हुन सक्छन् पनि सक्दैनन पनि । संसदमा नेपाली कांग्रेसले उसको चित्त नबुझेर समग्ररुपमा विधेयक पारित गर्न नदिन नाराबाजी गर्यो ।
कांग्रेसलाई विधेयक चित्त नबुझ्नुमा विधेयकका विषयवस्तुमा मतभिन्नता भन्दा पनि उसका आफ्नै राजनीतिक वाध्यता छ । राजनीतिक स्वार्थ छ । तर नेपाली कांग्रेसले आफ्ना बाध्यतालाई संसदभित्र छिराएर विधेयकलाई असफल बनाउन लाग्नुले उ माथि प्रश्न खडा भएको छ । कांग्रेस अल्पमतका आधारमा राज गर्न चाहन्छ हो? यो पक्कै होइन । हो भने अप्रजातान्त्रिक अभ्यास हो ।
लोकतन्त्रमा विपक्षीले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा बिर्सन्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त हुनै सक्दैन । स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकबारे संसद आउनु अघि पर्याप्त छलफल भएकोमा कांग्रेसले संसद्मा बलमिच्याइ र वार्गेनिङको थलो बनाउनु उपयुक्त थिएन ।
निश्चय नै विपक्षी दलले सरकारका गतिविधि चित्त नबुझेमा – सडक र संदनमा आन्दोलन गर्न सक्छन् । त्यो बाटो सुरक्षित छ । तर बहुमत पाएको सरकारलाई अवरोध पुर्याउने चेष्ठा गरियो भने त्यसले मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई गम्भीर ठेस लाग्नेछ । यो बहुमत जनताको अभिमतको तिरस्कार गरे बराबर हो । प्रजातान्त्रिक भनिने दलबाट प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित काम हुनु आउँदा दिका लागि समेत अवश्य नै ठीक संकेत होइन ।
संसद बाहिर आफ्ना कार्यकर्तालाई उर्जा दिन केही दलले आवेगको भाषा बोले । यसले सरकार र विपक्षीबीचको दूरी बढाउने छ । सरकारले पनि विपक्षी दललाई समदूरीमा राखेर उसका न्यूनतम विषयवस्तु पूरा गर्नै पर्छ । तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमै उल्लेख्य छलफल भइसकेको अवस्था छ । उल्लेख्य छलफल भएको विषयवस्तु पुन: संसदमा बल्झाउनुमा कतै अर्कै उद्देष्य पो छ कि भन्नी शंका गर्ने ठाउँ दिन्छ ।
सरकारको यो कदमपछि सत्तारुढ दल नेकपाले भने संसदमा अल्पमतले बहुमतलाई अनिर्णय बनाउने प्रवृत्तिको अन्त भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर सरकारले विपक्षीलाई चित्त बुझाउने गरी काम गर्न भने बिर्सन हुँदैन ।
लामो समयदेखि विधेयकका लागि भन्दै अनसन बस्दै आएका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक गोविन्द केसीका शतप्रतिशत माग विधेयक पारित भएसँग पूरा भएका छन् । कुनै पनि विधेयक वा कानूनी दस्तावेज संदैव जस्ताको तस्तै रहने भन्ने हुन सक्दैन । समयसँगै परिमार्जित गर्ने र समयसापेक्ष बनाउने ठाउँ खुला रहन्छ नै । सरकारले पनि विपक्षी दल र चिकित्सक केसीलाई विधेयकलाई क्रमश: प्रगतिशील बनाउँदै लग्ने कुरामा विश्वास दिलाउनुपर्छ ।
त्यसैले यो दिनलाई केसीले समेत अनसन तोड्न र खुशीयाली मनाउने दिनका रुपमा उपयोग गर्दा विधेयकको कार्यान्वयनले सार्थकता पाउनेछ ।
पशुपति क्षेत्र गुरुयोजनाको विरोध , कोषका सदस्य सचिवलगायत कर्मचारीको राजीनामा माग
पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिले स्थानीय समुदायसँग छलफल नगरी एकलौटी ढङ्गबाट गुरुयोजना बनाएको जनाउँदै पशुपति
दशैंको टीका लगाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुगेका एक पूर्व पदाधिकारीको तस्वीर यो साता विभन्न